PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ရှမ်းတောင်ပိုင်း တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားမှုတွင် ဒေသခံ ၄ ဦး သေဆုံး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များ ဆေ...
ငိမ်းချမ်းရေးစစ်တမ်း(၁၀)။ ကေအင်ယူမှ သူငယ်ချင်းသို့...
ကွတ်ခိုင်အမြှောက်တပ်မှ TNLA တပ်စခန်းသို့ ပြင်းထန်စ...
မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ကိုကိုကြီးရဲ့ မိန့်ခွန်းစဆုံး
နမ့်ခမ်း အနီးတွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ တအန်းတပ်မတော်အား ...
မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ အပိတ် မိန့်ခ...
ယနေ့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ကိုမင်းကိုနိုင် အသံ...
အစိုးရမှ ကျောင်းတရားဝင်ကျောင်းဖွင့်ထားပေးပြီး ကျော...
နမ့်ဆန်တွင် TNLA တပ်မတော်နှင့် တပ်မ (၇၇)တိုက်ပွဲဖြ...
လူသတ်မှု မကျုးလွန်ကြောင်း မြန်မာ ၂ ဦး အခိုင်အမာပြော
ကွတ်ခိုင်မြို့အနီးတွင် TNLA နှင့် မြန်မာစစ်တပ် တို...
သျှမ်းပြည်နယ်အတွင်ဒ အစိုးရနှင့် FUA တပ်ပေါင်းစုအကြ...
?????....အမှန်တကယ် အာဏာရှင်ဆိုသူတွေကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒ...
တိုင်းရင်းသားများ၏ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးချက်ကို စစ်တ...
ကျင်းပရေးကော်မတီမှ ပထမဆုံးကြိမ် ညှိနှိုင်းစည်းဝေးမှ...
ကော်သူးလေ တပ်မတော် KAF အဖြစ် ပေါင်းစည်းမှု အငြင်းပွ...
ပြည်သူဘက်က ရပ်တည်မိလို့ အလိုမကျတော့ချိန်မှာ ပေးလို...
ရွာနှင့်အနီးဝန်းကျင်အား လက်နက်ကြီးအလုံး (၂၀)ကျော်ပ...
ဖါးကန့် KIA,တပ်ရင်း (၆)သည် ၄င်းတို့နေရာမှ လုံးဝ ဖယ...
ကရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းပြီ
နိုဗဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ပါကစ္စတန်မှ မာလာလာနှင့် အိ...
ဒီကေဘီအေနှင့် အရပ်သားကို အစိုးရစစ်တပ် ဖမ်းဆီးထိန်း...
ရှမ်းတောင်ပိုင်း တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားမှုတွ...
နမ္မတူမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မတော်နှင့် မြန်မာအစိုး...
တာဝန်ကျေတဲ့ ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ
DKBA ဗျူ ဟာမှူးကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
ဗိုလ်မှူးကြီးတိုက်ဂါးအား မြ၀တီမြို့မရဲစခန်းက လက်နက်...
ကို Nay Myo Zin (FB)စာမျက်နှာမှ တိုက်တွန်းနှိုးဆေယ်...
ဆန္ဒပြပွဲ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မှာ အပစ်ရပ်ပြီး တပ်တွေဆုတ်ခွာပေးဖို့ "...
UWSA နှင့် မိုင်းလား အဖွဲ့ တို့ ၏ မြန်မာ အစိုးရထံသ...
ရူပဗေဒ နိုဘယ်ဆု ဂျပန် ၃ ဦး ရရှိ
SSPP နှင့် အစိုးရတပ် သုံးရက်မြောက် တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ်
မြန်မာ့တပ်မတော် တအာင်းဒေသသို့ စစ်အင်အား ထပ်မံ တိုး...
ဗုံးကြောင့် တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင်အတွက် စိုးရိမ်
ကမ္ဘာ့ မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို ...
SSPP/SSA တပ်စခန်းအား အစိုးရတပ် လက်နက်ကြီးဖြင့် မရပ...
ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲကြီးမှ "THEY CAN'T KI...
SSA တပ်စခန်း ငါးခုကို အစိုးရတပ် ထိုးစစ်ဆင်
တိုက်ဆိုင်မှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ (အောက်တိုဘာ ၁...
ဒုကာချုပ်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် SSPP/SSA အား အစိုးရတပ် ...
နမ့်ခန်းမြို့အနီးတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ TNLA တပ်မေ...
ငြိမ်းချမ်းရေး မအောင်မြင်လျှင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မ...
ပွင့်လင်းစ မြန်မာပြည်နှင့် ဂျပန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး
ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း (၇)။ ကေအင်ယူ၏ ရပ်တည်မှု နှင်...
တိုက်ပွဲတွင် DKBA တပ်သား (၅)ဦး သေဆုံး၍ အစိုးရစစ်သ...
ရှမ်းတောင်ပိုင်း တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားမှုတွင် ဒေသခံ ၄ ဦး သေဆုံး
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် ဝမ့်ဝပ် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (SSPP/SSA) နှင့် မြန်မာ အစိုးရတပ်များ ယခုလဆန်းပိုင်း အတွင်း တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားရာ၌ ဒေသခံ ၄ ဦး သေဆုံးပြီး ၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း သိရ သည်။
ကျေးသီးမြို့နယ် ဝမ့်ဝပ်ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ တာဖာဆောင် တံတားအနီးတွင် တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားပြီး ရွာတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးများ ရောက်ရှိ ထိမှန်သဖြင့် ဒေသခံ ၄ ဦး သေဆုံး၍ တဦး ဒဏ်ရာရရှိပြီး ဒေသခံ ရွာသားများ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် နေကြသည်ဟု ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေး မဏ္ဍိုင်၏ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ နန်းခွမ်လိတ်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“ရွာတွေထဲထိ လက်နက်ကြီးတွေ ရောက်တယ်။ ရွာမှာနေတဲ့ သက်ကြီးအဘိုးအို ၂ ဦးကို ထိတာကြောင့် သေဆုံးသွားတယ်။ နောက်၂ ဦးက မိုင်းရယ် ဈေးသွားတဲ့ လမ်းမှာ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံရတယ်။ ဒေသခံ တဦးကတော့ မော်တာကျည် ထိပြီး ကျေးသီးဆေးရုံမှာ တင်ထားရတယ်။ တိုက်ပွဲကြောင့် ဒေသခံ ရွာသားတွေ အိမ်မှာ မနေရဲကြဘူး။ တခြားကို ထွက်ပြေး နေကြတယ်။ တောထဲ တနေရာမှာ
ခိုလှုံနေရတယ်”ဟု နန်းခွမ်လိတ်က ဆိုသည်။
အစိုးရ စစ်တပ်သည် ကျေးရွာမှ ရွာသားများကို ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ဒေသခံများ၏ နေအိမ်မှ ပစ္စည်းများ လုယက်ကြသဖြင့် ရွာသားများက တောထဲတွင် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် နေရသည်ဟု ယနေ့ထုတ် ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေး ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
အစိုးရ စစ်တပ်မှ တိုက်ပွဲအတွင်း SSPP/SSA တပ်စခန်းကို သိမ်းပိုက်ထားပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၅ ရက် နောက်ပိုင်း ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုကို ခဏ ရပ်တန့်ထားသော်လည်း တပ်အင်အား ဖြည့်တင်းခြင်းများကို အစိုးရ စစ်တပ်က လုပ်ဆောင်နေသဖြင့် ဒေသခံ များမှာ အချိန်မရွေး တိုက်ပွဲများ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားမည်ကို စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေသည်ဟု ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေး ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
“လက်ရှိ ဒုက္ခသည်တွေ ဘယ်လောက် အထိရှိလဲ မသိရသေးဘူး။ သူတို့တွေ ဘယ်တွေမှာ ခိုလှုံနေတာလည်း သေချာ မသိရသေး ဘူး။ တာဖာဆောင် အနီးမှာ ရှိတဲ့ ရွာပေါင်း ၁၀ ရွာ ရှိပါတယ်။ သူတို့ကို ကူညီဖို့အတွက် ကျနော်တို့ တေးဂီတ ရန်ပုံငွေပွဲတွေ လုပ် နေပါတယ်။ ရတဲ့ငွေတွေကို ရှမ်း ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီသွားမှာပါ”ဟု မူဆယ်မြို့မှ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး လုပ်ဆောင်နေ သည့် ဦးစိုင်းမြတ်အောင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် ရှမ်းပြည် တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း(SSPP/SSA ) တို့ ဇွန်လနှောင်းပိုင်းမှ စတင်ပြီး စစ်ရေး ပြန်လည် တင်းမာ လာ သည့် အတွက် ဒေသခံပြည်သူ ၂၀၀ ကျော်သည် ဖာဆောင် ကျေးရွာအုပ်စု အနီးရှိ ဝမ့်ဝပ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စစ်ပြေးရှောင် နေကြ ကြောင်း သိရသည်။
“လက်ရှိမှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် တင်းမာနေကြတဲ့ အတွက် ကျေးသီးမြို့နယ်ဘက်ကို ဖုန်းဆက်သွယ်ဖို့ ခက်ခဲ နေတယ်။ ဒုက္ခသည် တွေ ဘယ်မှာနေလဲ ဘယ်လောက်အထိ ရှိလဲဆိုတာ မသိရသေးဘူး”ဟု ဦးစိုင်းမြတ်အောင်က ဆိုသည်။
SSPP/SSA နှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့တို့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပဏာမ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘော တူညီမှု ရရှိထားသော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လအထိ တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ SSPP/SSA ၏ တပ်စခန်း ၅ ခုကို အစိုးရ စစ်တပ်က သိမ်းယူခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
သတင်း၇င်းမြစ် - ဧရာဝတီ
Posted by PNSjapan at 12:50 AM